Gwayana Weston Inozivisa Zvitsva 2030 Zvinangwa - Potatoes News
Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW) yakaburitsa mushumo wayo wepiri wegore weEnharaunda, Zvemagariro, Utongi (ESG) nhasi, izvo zvaisanganisira zvibodzwa zvitsva zve2030 ESG. Kambani iyi yakazivisawo kuti mukudyidzana neEuropean joint venture Lamb Weston / Meijer, masangano akazvipira kuchirongwa cheSainzi-Chete Chinangwa (SBTi) uye achafananidza zvinangwa zvehu kabhoni kutsigira Chibvumirano cheUnited Nations Paris Chibvumirano.
Zvinangwa zvekambani zve2030 zvinotarisa pazvikamu zvina zvakasiyana zvecheni yayo yekukosha.
Dzivirira zvido zvinotarisisa kukanganisa kune vanhu, zvichitarisa zero shiviriro yezviitiko zvekuchengetedza wega uye zviitiko zvekuchengetedza chikafu.
Dyara: yakajeka, inogona kuyerwa kudzikisira tarisiro yekambani yekurima tsoka, kusanganisira kudzikisira mvura, nitrogen, uye chinoshanda chemushonga wemushonga unoshandiswa kurima mbatatisi.
Gadzira: kutarisirwa kwekutarisira, kurongedza, uye kugona kwekugadzira zvinangwa zvinotarisana nekugadzikana kwemamiriro ekunze, kusanganisira kudzikisira mukubvisa kabhoni, kushandiswa kwemvura, uye tsvina yezvokudya
Ipa kuzvipira kwakajeka kwekupa kukosha kunharaunda dzinoshanda Lambon Weston, kusanganisira chikafu chekudya, kusiyanisa, kuenzana uye kusanganisa, uye hunyoro.
"Maitiro edu eESG ari kuramba achichinja, uye tiri kufara kutora danho rakakosha iri, kuzvipira kuSBTi," akadaro Tom Werner, CEO, Lamb Weston. "Pamwe chete nevatinoshanda navo kuGwayana Weston / Meijer, tinotenda kuti SBTi ichavaka kuzvidavirira uye kuomarara mukuedza kwedu kudzikisa pasi redu."
Tags: Gwayana Weston
Zvakatipoteredza zvine hushamwari tsika dzekurima dzinoshandiswa neinosvika 33% yemapurazi epasirese
WUR iri kuongorora ingangoita brown brown hutachiona nzira kuburikidza nemazamu midzi